प्रकृती बिना जीवन छैन’ भन्दै तस्बिर राखेको ३० मिनेटमा प्रकृतीले नै लियो डा. दीपाको ज्यान – Dainik Sangalo
प्रकृती बिना जीवन छैन’ भन्दै तस्बिर राखेको ३० मिनेटमा प्रकृतीले नै लियो डा. दीपाको ज्यान
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र १७, २०७८ समय: १४:०३:१२
डाक्टर दीपा शर्माले लगातार आफ्नो यात्रा सोशल मिडियामा अपडेट गरिरहेकी थिइन्, मानिसहरूलाई प्रकृतिको सुन्दर दृश्यहरूबारे जानकारी दिँदै थिइन् । तर दीपा वा सोशल मिडियासँग सम्बन्धित कसैलाई पनि यो अन्तिम क्षणहरू हुनेछन् भनेर सोचेकै थिएनन्।
भारत हिमाचल प्रदेशको किन्नौरमा आइतवार हृदय दर्दनाक दुर्घटना भयो। एक लामो समयको लकडाउनपछि, एक खुशीको समय बिताउन आएका पर्यटक पहिरोमा परे । पहिरोमा जम्मा नौ जनाको मृ,त्यु भयो। यसमा आयुर्वेद डाक्टर दीपा शर्मा पनि थिइन् जसले आधा घन्टा अगाडि उनको तस्विर पोष्ट गरेर लेखेकी थिइन् प्रकृति बिना जिवन छैन ।
दीपा शर्मा सोशल मिडियामा धेरै सक्रिय थिइन् । उनी पहिलो पटक एकल यात्रामा गइन्। दीपाले लगातार आफ्नो यात्रा सोशल मिडियामा अपडेट गरिरहेकी थिइन् । मानिसहरूलाई प्रकृतिको सुन्दर दृश्यहरूबारे जानकारी दिँदै थिइन् । तर उनको जिवनको यो अन्तिम यात्रा हुनेछ भन्ने कसैले कल्पना गरेका थिएनन् ।
आइतबार घटना हुनुभन्दा आधा घण्टा पहिला उनले ट्वीटरमा एक तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले लेखिन् कि म अहिले भारतको अन्तिम बिन्दुमा उभिएकी छु, जहाँसम्म साधारण नागरिकहरूलाई जान दिइन्छ। तिब्बत यसभन्दा ८० किलोमिटर अगाडि छ, जुन चीनले ओगटेको छ।
सोशल मीडियामा दीपाको यो तस्वीर मान्छेहरूले मन पराएका छन् । यस यात्राको आनन्द उनको अनुहारमा पनि देखिन्थ्यो, तर कसैलाई थाहा थिएन कि यो अन्तिम तस्वीर हो। सोशल मीडियामा उनका प्रशंसकहरू ३४ वर्षीया दीपा शर्माको आकस्मिक निधनबाट अचम्मित र दुखित बनेका छन्
Last Updated on: September 2nd, 2021 at 2:03 pm